magetsi Art sens - mazano eimba nebindu
Mhedzisiro ye: magetsi
Mhando ina dzeKrisimasi Dzakashongedzwa Pfungwa Dzemakenduru.
Zviitire mwenje yemafuta
Murazvo wemusango unogara uchigadzira nyaradzo mumba uye inogona
Heano mamwe makuru mazano ekushongedza mwenje. Sei
Dzimwe dzakanaka tafura yekushongedza tafura
Sarudza chimiro chako! Tinokupa iwe wakanyanya kunaka uye wakanaka
Halloween izororo rinopembererwa musi waGumiguru 31 zvakanyanya pa
Kenduru mwenje inogadzira yakasarudzika ushamwari uye zverudo mamiriro. Rini
Mwenje Huru nePottery Barn
Gamuchirwa zhizha nezviridzwa zvePottery Barn. Cheni yeAmerica
Kuvhenekesa chikamu chakakosha chemukati. Kubva pane yakasarudzwa sarudzo ye
Yakatsva yegadheni yekushongedza mazano. Dzimwe pfungwa dzinonakidza sei